जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ डिम्याट खातामा, कति पाउला त ओपन रेञ्ज ?
२०७८ सावन, १२
साउन १२, काठमाडौं ।जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ डिम्याट खातामा आएको छ ।
कम्पनीको आईपीओ जेबीएलबी स्टक कोडबाट डिम्याट खातामा आएको हो । कम्पनीको आईपीओ नेप्सेमा सूचिकरण प्रक्रियामा रहेको छ । कम्पनीको आईपीओले पहिलो कारोबारको लागि रू. ३०५ देखि ९१५ दशमलव ८१ ओपन रेञ्ज पाउने देखिएको छ ।
कम्पनीको आव २०७६/ ७७ को बास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ३०५ दशमलव २७ रहेको र नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म मूल्य रेञ्ज तोक्ने भएको उक्त रेञ्ज पाउने देखिएको हो ।
कम्पनीको आईपीओ गत असार २३ गते बाँटफाँट भएको हो । उक्त बाँडफाँटमा गोलाप्रथाबाट २० लाख १८ हजार ३०१ जना योग्य आवेदकमध्ये १ लाख ८४ हजार ८०१ जनाले १० कित्ता शेयर पाएका थिए ।
ती आवेदकमध्ये अझ पाँच जना आवेदकले त ११ कित्ताका दरले शेयर पाएका थिए । कम्पनीले असार ११ गते देखि १५ गतेसम्म १९ लाख ७७ हजार ३०० कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । जसमध्ये ३० हजार ४२० कित्ता कर्मचारीको लागि ९८ हजार ८६५ कित्ता सामुहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको र बाँकी १८ लाख ४८ हजार १५ कित्ता सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको हो ।
हाल कम्पनीको संस्थापक तर्फबाट चुक्ता भएको पूँजी रू. ४९ करोड ६ लाख ७० हजार रहेको छ । आईपीओ निष्कासन तथा बाँडफाँट पछि पूँजी रू.६० करोड ८४ लाख पगेको छ । त्यसैगरी आव २०७६/ ७७ सम्म कम्पनीको बास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १०४ दशमलव ९७ रहेको छ ।
मैलुङ खोला जलविद्युतको शेयरमूल्य ६.०३% बढ्यो, प्रतिकित्ता मूल्य २०५.७० [२०७८ असोज, १०]
युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरका सञ्चालकको राजीनामा स्वीकृत[२०७८ असोज, १०]
२.१७ % ले घट्यो बजार, ६ अर्ब ५० करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री [२०७८ असोज, १०]
अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको साधारण सभा असोज १९ गते हुँदै[२०७८ असोज, १०]